Dzidza mitauro kubva kupi zvako uye nekumhanya kwako ne italki | Nhau dze iPhone
Ignatius Room | 17/05/2022 08:01 | IPhone maapplication, App store
Hapana anogona kuramba izvozvo Chirungu chagara chiri mutauro wepasi rose, mutauro waunogona kuita kuti unzwisiswe munenge munyika ipi neipi pasi pano, kunyange usiri mutauro wavo wepamutemo. Chingave chiRungu kana chero mumwe mutauro, nzira yakanakisa yekuchidzidza, kunyora uye kutaura, ndeyekudzidzira. Zvakanaka chaizvo kuona zvakatevedzana mune yepakutanga vhezheni.
Zvakanaka zvakare kuverenga mabhuku kana zvinyorwa zveChirungu. Asi Chii chinoitika kana uchifanira kuzvitaura? Zvinhu zviviri: hauzive matauriro ako uye mataurirwo ako akafanana neMinion pane mutauro wauri kuedza kutaura.
Mhinduro iri nyore ndeye kushandisa application senge chiikei. italki haisi imwe yeakawanda maapplication aripo muzvitoro uye anokupa iwe nyore maekisesaizi mune mimwe mitauro, asi panzvimbo pezvo. iapp inopa makirasi emitauro nevadzidzisi veko mukati mefoni yako. Chokwadi, vakaratidza izvozvo Maawa gumi nemapfumbamwe ne italki inopa ruzivo rwakafanana semesita yese yeyunivhesiti, sezvo app ichipa nhaurirano chaidzo nevadzidzisi veko kuitira kuti chero munhu anodzidza mutauro anogona kunyura mukushandisa kwawo.
Gara uchidzidza mitauro nemudzidzisi wekuzvarwa Ndiyo sarudzo yakanakisa, sezvo ichitibvumira kudzidza kutaura zvakarurama uye kururamisa zvikanganiso zvinobvira pamataurirwo zvatinazvo.
Zvidzidzo zvemutauro zvinoda kuzvipira kwekupinda uye kuronga izvo, zvichienderana nebasa redu, isu tingasakwanisa kusangana. Mhinduro, zvakare, inowanikwa pa italki.
1 Ko iyo italki app inotipei
1.1 Dzidza nehunyanzvi hwekuita
1.2 Rusununguko rwezvirongwa
1.3 Inokodzera homwe dzese
1.4 Zvekufona zvemunhu
1.5 Makirasi mumitauro inopfuura 150
1.6 Iwe hautangi kubva pakatanga
1.7 kugadzirira bvunzo
1.8 Zvakawanda zvemukati zviripo
1.9 Unoziva mitauro here? Wana mari yakawedzerwa
2 Iyo italki inoshanda sei
Ko iyo italki app inotipei
Kana iwe wakatopfuura nechikoro chemutauro uye wakarega kuenda nokuti iwe hauna kufarira nzira, makirasi akanga asinganakidze, chiyero chakanga chakaderera kana chakakwirira kune ruzivo rwako ... ne italki hauzowani dambudziko iroro.
Dzidza nehunyanzvi hwekuita
italki inoita kuti iwanikwe kune vese vashandisi vayo pamusoro pe30.000 vadzidzisi vekusarudza kubva. Semuenzaniso, mukati mevadzidzisi vanotaura Chirungu, unogona kusarudza kuti ndevapi vanotaura British English kana American English kuti utarise kudzidza kwako kunyika yaunoronga kuvandudza ruzivo rwako.
Nevadzidzisi vanokwanisa varipo paitalki unogona dzidza chero mutauro kubva pakutanga, kuburikidza nematanho akasiyana ekudzidza avakagadzirira.
Tinewo vadzidzisi vatinokwanisa kuvandudza mataurirwo edu, kuti kuwedzera mazwi uye mataurirwo mune dzimwe nzvimbo (bhizinesi, misangano, kufamba, nguva yekusununguka ...) kana kungotaura nezve chero musoro wenyaya kuti tichengetedze ruzivo rwedu rwemutauro.
Imwe yematambudziko ayo vashandisi vazhinji vanoda kudzidza mitauro vanotarisana nayo idambudziko rekugona batanidza makirasi nebasa, kunyanya pavanozviita mumashifiti kana kuswera muhofisi.
pamwe italki unoisa zvirongwa uye nguva yaunoda kutsaurira zuva nezuva kana vhiki nevhiki kuti udzidze mutauro mutsva kana kuvandudza ruzivo rwaunarwo.
Sarudza iyo nguva yemakirasi (30, 45, 60 uye 90 maminitsi) kuti ugadzirise kune nguva yekusununguka yaunayo (nguva yemasikati, iwe uchifamba imbwa, iva nekofi ...).
Inokodzera homwe dzese
Nekutibvumira kusarudza zvirongwa zvinonyatsoenderana nenguva yedu yemahara, tinogona zvakare govera bhajeti remwedzi wega wega kuisa mari mukudzidza mutauro mutsva kana kuvandudza nhanho yedu. Iko hakuna chikonzero chekubhadhara kunyorera pamwedzi, iwe unobhadhara kune makirasi aunotora.
Mudzidzisi wega wega ane fees yake, mitengo inosiyana kubva pasi pe10 euros yevadzidzisi vane hunyanzvi kusvika isingasviki maeuro mashanu evarairidzi. Mutengo wacho unobva pane nguva yemakirasi uye rudzi rweruzivo rwavanotipa.
ne italki, makirasi acho ndeega uye anoitwa kuburikidza nemavhidhiyo mafoni. Nenzira iyi, tinogona kuenderera mberi nekudzidza mutauro kubva chero kupi zvako, kunyangwe zvichikurudzirwa kuzviita munzvimbo isina zvinokanganisa.
Tinogona kusarudza chikuva chinonyatsoenderana nezvido zvedu, kana Skype, Zoom, Kirasi kana chero imwe vhidhiyo yekufona app.
Makirasi mumitauro inopfuura 150
Ne italki tinogona dzidza mitauro inodarika zana nemakumi mashanu. italki inotipa mitauro yakasiyana-siyana yekudzidza, izvo zvinozotibvumira kugutsa zvido zvedu mune mimwe mitauro, kudzidza izvo zvekutanga zvemutauro watisingazive zvizere, kuzadzisa mwero wedu wemutauro mune dzimwe nzvimbo. ..
Iwe hautangi kubva pakatanga
Makirasi asati atanga, tarisa iyo mwero weruzivo rwemutauro waunoda kudzidza. Hazvina musoro kutanga nemutauro unonyanya kukosha, kana ruzivo rwako ruchikubvumidza kuti uve nekurukurirano dzakapfava, kunyange kana mataurirwo ako nenzwisiso zvisina kunaka.
Zita rakanakisisa rinogona kuitwa nemunhu ruzivo. Mazita akanaka show off pane CV, asi nzira yakanakisisa yokuiratidza nayo ndeyokutaura nokunyora mutauro wacho.
Kana iwe uchida wana zita rekuwedzera kune yako tangazve, ne italki iwe uchave nerubatsiro rwunodiwa kuti uiwane zviri nyore nekuda kwezvirongwa zvakasiyana zvavanopa mupfungwa iyi.
Zvakawanda zvemukati zviripo
Pamusoro pekutsigira makirasi ega ega evhidhiyo mafoni, italki inoita kuti iwanikwe kune vashandisi vayo huwandu hwakawanda hwemukati hwemarudzi ese senge podcast, nyaya dzehurukuro, maekisesaizi, mibvunzo...
Kana iwe uchida kudzidza uye uchigara, dzidza mutauro mutsva kana kukwana ruzivo rwaunotova narwo Kunenge kuri kusona nekuimba.
Unoziva mitauro here? Wana mari yakawedzerwa
Kana iwe uchiziva mitauro uye uchida kuwana imwe mari kuva mudzidzisi. italki inoisa kwauri papuratifomu yaunoda kudzidzisa mitauro usingabve pamba, iyo yaunogona kuseta mareti ako, uve neako masheti, gadzira makirasi ako ...
Iyo italki inoshanda sei
Kana iwe uchida kuziva dzidza zvakawanda nezve mashandiro anoita italki, unogona kushanyira webhusaiti yavo, kwaunogona:
ona pfupi mharidzo yevadzidzisi varipo.
El mutengo wemakirasi yemumwe nemumwe wevadzidzisi varipo.
Isa nhanho yemutauro wako uri kutsvaga kutsvaga vadzidzisi vachakubatsira kudzidza.
Nezve kuwanikwa, unogona dhawunirodha italki paiOS, ine iOS 11 iri iyo shoma shanduro inodiwa nemudziyo. Asi zvakare, inowanikwawo kuMac yakagadzirirwa neApple's M1 processor kana kupfuura.
Zvakare zviripo italki paGoogle Play Store kuburikidza neyakanzi link kuti ugone kunakidzwa nayo pane yako Android zvishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Dzidza mitauro kubva kupi zvako uye nekumhanya kwako ne italki